सोमबारको दिन के गर्दा भगवान शिव खुशी हुन्छन् ! पुरा पढनुस् ! शेयर गर्नुस ! « aamsanchar.com , aamsanchar
सोमबारको दिन के गर्दा भगवान शिव खुशी हुन्छन् ! पुरा पढनुस् ! शेयर गर्नुस !